UMGANGATHO WEENKUNI ONGENAMANZI KWIIGUMBI LOKUHLAMBELA - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Umgangatho weenkuni ongenamanzi kwiiGumbi lokuhlambela
Umgangatho weenkuni ongenamanzi kwiiGumbi lokuhlambela
Apha ngezantsi sabelana ngendlela yokungena manzi kumgangatho weplanga lokuhlambela kubandakanya amanyathelo okufaka kunye neengcebiso zokunceda.
Ukuthintela ukungangenwa kwamanzi emgangathweni kwigumbi lokuhlambela kubalulekile ekugcineni umgangatho ubukeka umhle. Ngokutywina iinkuni unokwenza kube lula ukucoca ukuchitheka kwamanzi kunika ukunganyangeki kwebala. Oku kunokukunceda ukuthintela amanzi ekuthungeni nasekumiseni okungadala umonakalo omkhulu kumgangatho wakho. Ukuthintela amanzi kukwakhusela ukutyibilika kweenkuni ekukhuleni nasekunciphiseni okubangelwa kukuchitheka kwamanzi.
Inyathelo # 1 Sebenzisa indawo egqityiweyo yomgangatho weenkuni
Inyathelo # 2 Coca iNdawo
Inyathelo # 3 Isanti & icocekile
Inyathelo # 4 Faka isicelo sePrim Primer
Inyathelo # 5 Gcwalisa iZikhewu ngeSilicone
Inyathelo # 6 Faka iStywina lokuNqanda uManzi
Inyathelo # 7 Faka iiMaleko ezininzi
Ngaphambi kokuba uqwalasele umgangatho wokhuni kwigumbi lokuhlambela kubalulekile ukuba wazi ukhetho lwakho. Okona kulondolozwa simahla kukhetho lomgangatho uninzi lwabanini makhaya basebenzisa iiceramic okanye i-porcelain tile. Kukho iintlobo ezininzi ze iinkuni jonga iithayile zomgangatho Ezijongeka ngathi zingumthi wendalo kwaye zibonelela ngokhuseleko olungaphezulu lwamanzi ngexabiso eliphantsi. Umgangatho weVinyl lolunye uhlobo olukwabonelela ngenketho esezantsi yolondolozo kwaye iyaxhathisa kwisiliphu. Funda ngakumbi malunga olona hlobo lophahla lwendlu yangasese Apha.
Ukuba ufuna ngokuqinisekileyo uqinile imigangatho eqinileyo yomthi kwigumbi lokuhlambela lakho, gcinani engqondweni ukuba amanzi axhaphake kakhulu kwiindawo zokuhlambela kwaye yeyona ndawo ifumileyo kwikhaya lakho; kwaye ke kuya kufuneka uqiniseke ukuba ukutyibilika komthi kufakwe ngokugqibeleleyo. Oku kuthetha ukuba ukutyibilika komthi kufanele kufakwe kungabikho sikhewu ukuthintela ukufuma kungene kuwo.
Sincoma kakhulu ukuba ugqibezele indawo kumgangatho wakho onzima kunokuba ufake umgangatho ogqityiweyo. Ukugqitywa kwesiza kuya kugcwalisa imiqadi phakathi komgangatho wokhuni kunye nokwaleka okunokuthintela ukufuma ekungeneni embindini ukusuka kwicala eliphezulu; kodwa kufuneka uqiniseke ukuba amanzi ayakucinywa ekugqibeleni. Ngokwesiqhelo imigangatho eyenziwe ngomthi ene-lacquered okanye e-varnished inokumelana namanzi ngaphakathi.
Kukho iimveliso ezithile kwintengiso ezinokusetyenziswa kumgangatho wokhuni ukunceda ukukhusela emanzini. Nangona kunjalo, amanzi amileyo kufuneka asoloko ekhutshwa kwaye omiswe ngokukhawuleza ukunqanda ukonakala. Ukuba ungathanda ukwazi indlela yokulungisa imigangatho yeenkuni eyonakeleyo khangela eli phepha.
Xa ulungisa umgangatho wokhuni oza kusetyenziswa kwimveliso yokuthintela amanzi, qiniseka ukuba uqala ngokulungisa nawuphi na umonakalo kumgangatho wokhuni kwaye ucocekile ngononophelo nangokupheleleyo. Thatha konke ukungcola, ifanitshala kwaye uyicoce ngaphandle kothuli.
Isinyathelo esilandelayo kukuba isanti kumgangatho wokhuni. Inkqubo yesanti ithatha ixesha elininzi, kuya kufuneka wenze isanding ekunene ukuze ufumane iziphumo ezilungileyo-umonde sisitshixo. Xa usanti ngomthi wakho wokhuni, soloko uqala emaphethelweni usebenzisa isandpaper esirhabaxa kwaye uqhubekele phambili usebenzisa i-grit eqaqambileyo. Emva kokuba uyisanti yonke indawo, kuya kufuneka uphinde ucoce kwaye ucofe umgangatho.
Ekusebenziseni i-primer, sicebisa i-epoxy eyamanzi esekwe kuqala ukuba ingangeni amanzi. Sebenzisa iroller yokupeyinta okanye ibrashi xa ufaka isicelo sokuqala ukufumana imivumbo. Ukuqinisekisa ukuba igumbi lokuhlambela lakho lingqinwe ngokupheleleyo, yambatha malunga nee-intshi ezi-8 zodonga nge-primer kunye nesiselo esingangenisi manzi. Qinisekisa ukuba i-primer ixutywe kakuhle kwaye uyisebenzise ngokwemiyalelo kwileyibhile emva koko vumela i-primer yome okungenani iiyure ezine.
Nje ukuba i-primer yomile, ungaqala ukugcwalisa iintanda nge-silicone, oku kutywina umsantsa phakathi komgangatho kunye nodonga kunye nezinye iintanda phantsi. Eli nyathelo liqinisekisa ukuba zonke iintanda nezikhewu ezinokutsala ukufuma zivalwe ngokupheleleyo. Ngokwesiqhelo, kuya kuthatha iiyure ezingama-24 ukuba i-primer kunye ne-silicone zome kakuhle.
Ngoku ukulungele ukufaka imveliso yokungena emanzini. Sincoma ukungangenwa ngamanzi malunga nesiqingatha seenyawo ukuya kwii-intshi ezi-8 ukusuka phantsi eludongeni ukuqinisekisa ukungangenwa kwamanzi okupheleleyo kunye nokunciphisa umngcipheko womonakalo. Qala ukungangenisi amanzi ngokufaka iarhente yokuthintela amanzi eludongeni, wakugqiba ukufaka iarhente kwimigangatho.
Kubalulekile ukuba ufunde kwaye ulandele imiyalelo yomenzi kwileyibhile. Xa usebenzisa i-polyurethane sealer engenawo manzi, khetha imveliso eyioyile okanye esekwe emanzini. Olu hlobo lwesitywina luya kukhusela ukukhanya kwendalo komgangatho wakho weenkuni.
Qiniseka ukuba ufake isicelo hayi ngaphantsi kwemaleko amathathu; ukuvumela idyasi nganye ukuba yome kakuhle ngaphambi kokufaka umaleko olandelayo. Khangela nawaphi na amaqamza okanye imibimbi phakathi kweebhatyi; ukuba kungabakho nawaphi na amaqamza okanye imibimbi, kuya kufuneka uyisanti ngaphambi kokufaka idyasi elandelayo. Kule nkqubo, licebo elilungileyo ukusebenzisa i-mop mop okanye into yendalo eshinyeneyo ukufumana indawo efanelekileyo yokugubungela kunye nokunceda ukwenza isicelo esigudileyo. Sebenzisa ibrashi ukuya esiphelweni senkqubo ukufezekisa okuhle kwaye nokugqiba.
Iingcebiso: Khumbula xa ufaka imveliso engenamanzi, soloko usebenza ngasemnyango ukunqanda ukubanjiswa embindini wegumbi lokuhlambela. Sikwacebisa ukuba kungcono ungangenisi manzi kumgangatho wakho weenkuni ngemini eshushu neyomileyo ukuze umgangatho wome ngokukhawuleza nangokulinganayo.
Qiniseka ukuba igumbi lokuhlambela lakho linomoya ofanelekileyo ukuze unciphise ukufuma. Qaphela ukuba i-primer kunye ne-arhente yokungena emanzini iya kuthatha ixesha elide ukuba yome xa ukufuma kuphezulu. Ngalo lonke ixesha khawuleza ukophule konke ukuchitheka kwaye uphephe ukukhukula kwamanzi njengoko kusenokonakalisa umgangatho wokhuni ngaphandle kokuyisebenzisa ngononophelo imveliso engangenisi manzi kumgangatho wokhuni.
Okukwintsusa, ubungqina bamanzi yindlela entle yokuqinisekisa ukuba imigangatho yakho igcinwe kakuhle kwaye uhlala ukhululekile kumonakalo wokufuma kwiminyaka ezayo.
izimemo zomtshato ezinamagama omabini abazali
ulwamkelo lomtshato buffet imenyu izimvo
eyona app yokutshata yomtshato
isipho seminyaka engama-60 ubudala